नेकपा बैठकमा घम्साघम्सी - नागरिक रैबार
ओली : तपाईंंको त्यो प्रस्ताव होइन, बैठकले तयार गर्न जिम्मा दिएको पनि होइन। दुई अध्यक्षबीचको सल्लाह, सहमतिमा आएको पनि होइन। छलफल गर्ने हैसियतकै प्रस्ताव छैन तपाईंंको। यो गलत छ। यसमा तपाईंका कुण्ठा, असन्तोष, तपाईंका आरोप, अभियोग, लाञ्छना छन्। यसलाई पार्टीमा छलफलको लागि अगाडि बढाउने होइन कि यसले पार्टीको साख जनतामा गिराउने गरी आएको छ। तपाईंले सुनियोजित रूपमा ल्याएको, विखण्डन र विभाजनको आधार तयार पार्न ल्याएको हो। त्यसलाई फिर्ता गर्नुहोस्, क्षमायाचना गर्नुस्। अर्को कुरा, आफ्नो लाञ्छनापत्रको बुकलेट तपाईंले जुन पार्टी कार्यालयको नाम र लोगो दुरुपयोग गर्दै छाप्नुभएको छ, तल–तल पठाउनुभएको छ। लोगो प्रयोग गरेर केन्द्रीय कार्यालयको नाममा छाप्नुभएको छ। त्यो पार्टीको विधान पद्धतिविपरीत छ। तपाईंले कहाँको निर्णयले छाप्नुभयो ? कसको निर्णयले छाप्नुभयो ? यो अनुशासनको उल्लंघन हो। यसमा तपाईंलाई कारबाही किन नगर्ने ? म यो सोध्न चाहन्छु। तपाईंले यसमा कारबाही भोग्नुपर्छ। यो तपाईंको निजी पार्टी होइन। निजी पार्टीमा पनि यसो गर्न मिल्दैन। तपाईंले विगतमा नेतृत्व गरेको पार्टी होइन, यो नेकपा हो। यसमा निर्णय गरेर मात्रै छाप्नुपर्छ। अर्कोतिर, सहमतिबाहेक अन्य कुरा सोच्न सकिन्न। विधि र पद्धतिका नाममा बहुमत/अल्पमत मान्न सकिन्न। टाउको गनेर गरिने निर्णय मान्य हुँदैन। त्यसो गर्न खोजियो भने त्यस्तो बैठकको काम पनि छैन।
दाहाल : तपाईंले उत्तेजित बनाउने ढंगले बोल्नुभएको छ। तर, हामी उत्तेजित हुनुहुँदैन। हामी शान्तसँग छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने पक्षमा छौं। सचिवालयको बैठक किन माग गरियो ? कर्णाली घटना घट्यो, वीरगन्जमा पार्टीकै साथीको हत्याका घटना घटे, कोभिड छलफल गर्नु थियो, भारतीय रअ प्रमुखलाई बालुवाटार बोलाएर भेट्नुभयो, पार्टी निर्णयसम्म कार्यान्वयन गर्नुभएन। त्यसपछि बैठक बसौं भनेर पटकपटक माग गर्दा मान्नुभएन। हाम्रा निवासमा र हाम्रा पछाडि सीआईडी (सुराकी) छोड्नुभयो। त्यही भएर बाध्य भएर बैठकको अनुरोधको पत्र लेखियो। पत्रको जवाफ तपार्इंले आरोपबाट सुरु गर्नुभयो। फायर पहिले तपाईंले खोल्नुभयो। त्यसपछि जवाफ लेखेको हुँ। प्रस्ताव जे देखिएको हो, त्यही लेखेर ल्याएको हो। यो लाञ्छना हो या सत्य पार्टी कमिटीले भन्ने हो, तपाईंले होइन। अझ तपाईं को हो ? मैले ल्याएको प्रस्ताव फिर्ता हुनुपर्छ, छलफल हुन सक्दैन भन्ने ? किन हुन सक्दैन छलफल ? ….. दाहाल बोल्दै गर्दा ओलीले हस्तक्षेप गरे।
नेपाल : यो मित्रतापूर्ण अन्तरविरोध नै हो। दुश्मनीपूर्ण हुँदै होइन। अन्तरविरोधलाई दुश्मनीपूर्ण बनाउने, त्यस्तो ठान्ने र पार्टी फुटाउँछु भन्ने को हो ? पार्टी कसले फुटाउँदो रहेछ हेरौं त ? पार्टी कसको सम्पत्ति हो ? पार्टी फुट्छ र पूर्वएमाले एकातिर, पूर्वमाओवादी अर्कातिर हुन्छ भन्ने कसैले नसोचे हुन्छ। त्यसकारण पार्टी फुटाउने धम्की दिने, फुटको आतङ्क फैलाउने काम कसैले पनि गर्न पाइदैन। पार्टी फुट्दैन, फुटाउन दिइँदैन।
हिजो माले र माक्र्सवादीबीचको एकता मदन भण्डारी र मनमोहनबीचको एकता थियो ? त्यो कसको एकता थियो ? पार्टीले कसैलाई जिम्मा दिन्छ र त्यसैका आधारमा एकता हुन्छ। एकता भइसकेपछि पार्टी विधान र प्रतिवेदनका आधामा चल्नुपर्छ। अहिले नेकपामा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी भन्ने नै छैन, विघटन भइसक्यो।
नारायणकाजी श्रेष्ठ : छलफल गरेर नै निष्कर्ष निकाल्ने हो, तर औपचारिक बैठक कसैले पनि टार्न पाइँदैन।
त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले बैठक ५÷१० दिन जति सार्न प्रस्ताव गरे। माधव नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठले बुधबार (आज) दिउँसो १ बजेलाई बैठक तय गर्न प्रस्ताव गरे। दाहालले बुधबार (आज) दिउँसो ३ बजे बालुवाटारमै बैठक बसौँ भन्ने कुरा राखे।
अन्तिममा दाहालले बुधबार दिउँसो १ बजे बैठक वस्ने कुरा सुनाए।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री बोले– ‘भोलिको बैठकमा म आउन सक्दिनँ। मेरो अरू व्यस्तता छ। तपाईँहरूलाई सल्लाह समझदारीले गर्नु छैन भने के– के गर्नुपर्ने छ, गर्नुस्। भोलिको बैठक केही दिनपछि सारेर छलफल गरेर नयाँ प्रस्ताव बनाएर बैठक राखौँ। पार्टीलाई अगाडी बढाउने गरी जाने हो भने त्यसो गरौँ। तर आपूmलाई लागेको अनुसार गर्ने हो भने मन लागेको गर्नुस्। पार्टी विभाजन, विखण्डन र सर्वनाश गर्नेतिर तपाईँहरू जान खोजिरहनु भएको छ। त्यसो भए बैठकको के औचित्य भयो र ? जे मन लाग्या छ त्यही गर्नुस्, तपाईँका आफ्ना कुरा होलान्। गर्नुस्।
बैठक समापन गरेर त्यसपछि नेताहरू बालुवाटारबाट बाहिरिएका थिए।